Murashaxiinta xisbiga UDUB oo xalay ka guureeyay Hargeysa | Xarshinonline News
Murashaxiinta xisbiga UDUB oo xalay ka guureeyay Hargeysa
Hargeysa (NNN)- Murashaxiinta xisbiga talada dalka haya ee UDUB, ayaa xalay ka guureeyay caasimadda Hargeysa.
Inkastoo aanu jirin war rasmi ahaan Xukuumadda iyo xisbigeeda UDUB ka soosaareen socdaalkaa, haddana siday siday ilo-wareedyo lagu kalsoonyahay sheegeen, Madaxweyne kuxigeenka Somaliland, ahna Murashaxa jagada Madaxweyne kuxigeenka xisbigaas Axmed Yuusuf Yaasiin, ayaa xalay cawayskii ka baxay magaalada Hargeysa.
Socdaalkaas oo aan la sheegin cida ku wehelisa, waxa uu Madaxweyne kuxigeenku sida la sheegay ugu kicitimay magaalo-xeebeeda Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.
Warku wuxuu intaa ku daray, in sidoo kale Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin oo hadda Murashaxa Madaxweynenimo ee xisbigiisa u taagani uu xalay xilli dambe ka baxay magaalada Hargeysa.
Ma cadda halka uu ku jihaysan yahay socdaalka Madaxweynuhu, hase yeeshee siday ilahaa xogogaalka ahi tibaaxeen, waxa uu u baxay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag.
Madaxweyne Rayaale oo xalay abaarro 11:00 habeenimo caasimadda Hargeysa ka baxay, lama sheegin cidda ku wehelisa socdaalkiisa.
Sidoo kale, ma cadda muddada uu qaadan doono safarkaa la sheegay inuu ugu guureeyay gobolka Sanaag.
Murashaxiinta Xukuumadda oo socdaalkoodu la xidhiidha ololaha doorashada Madaxtinimada ee la filayo inay dalka ka dhacdo 26 June, waxa lagu wadaa inay maanta taageerayaasha xisbigooda kula hadli doonaan xarumaha gobollada ay u baxeen.
Mar aanu la xidhiidhnay Afhayeenka Madaxtooyada, si aanu wax uga waydiino socdaalkaa la sheegay inay u baxeen Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu, noomay suurtogelin in aanu helo, ka dib markii uu Telefoonkiisa gacanta qaban waayay.
Wararka qaarkood waxa ay sheegeen in M/weyne Rayaale ku sii nasan doono magaalada Berbera, isla markaana subaxnimada maanta diyaarad u raaci doono dhinaca Ceerigaabo.
Intii ololahan doorashada Madaxtooyadu bilawday, Murashaxiinta xisbiga UDUB kamay bixin caasimadda Hargeysa.
← Dacwad Lid Ku Ah Dawladda JSL (M/weyne Daahir rayaale)
Jeneraal Ismaaciil Axmed Ismaaciil fariin u diray dhinacyada siyaasada iyo shacbiga reer Somaliland →